Kala bedel Muraayadaha - Clothes : Horumarinta (-55%)
Miyaad xiiseyneysaa in dib loo eego saacadaha saacadaha, boorsooyinka, kabaha ama bacaha?
Markaad timaado meel sax ah!
Ma waxaad raadineysaa dalab qani ah oo ballaaran oo ku saabsan noocyada ugu caansan iyo kuwa soo saarayaasha ah? Marka aad alaab iibsanayso, waxaad rabtaa inaad hubiso inaad heli doonto tayada ugu sareysa, sharci ahaanta iyo ka timaad maqaalo sir ah oo sharci ah? Miyaad xiiseyneysaa in dib loo eego saacadaha saacadaha, boorsooyinka, kabaha ama bacaha? Markaad timaado meel sax ah!
On suuqyada Polish ee suuqyada ah ee caan ku caan ah ku raaxeeysan raaxo weyn iyo caan ah. Sababta ugu weyn ee uu yahay waa xaqiiqda, in lagu iibsan karo xitaa dhowr jeer qiimaha hooseeya, iyada oo weli lagu gartaa alaab tayo wanaagsan leh, taas oo ah wax yar ama gebi ahaanba kama duwana asalka. Qiimaha jimicsiga, xaaladaha gaagaaban, bixinta hodanka ah iyo adeegga xirfadlaha - dhammaantood waxaa bixiya dukaankeenna oo leh badeecooyin, boorsooyin, dhar iyo waxyaabo kale oo badan.
In la ogaado xaqiiqooyinka suuqa iyo waxyaabaha laga filayo iibsadayaasha, waxaanu kaliya soo bandhigi doonaa jadwalaha dahabka, muraayadaha ama saacadaha, kuwaas oo isku tijaabiyey nafteena si aan ugu guuleysan karno tayadooda. Dalabaadka waxaa ka mid ah Ray Ban, Versace, Miu miu, Rolex, Emporio Armani iyo Bvlgari, Piaget ama Tiffany & Co. Qalab faahfaahsan oo dhammeystiran ayaa laga heli karaa boggeena dukaanka
Muraayadaha waa mid ka mid ah qalabka fudud ee ugu fudud ee aragti ahaan is bedelaya muuqaalkaaga, wejigaaga, oo si wayn u bedelaya sawirka qofka. Iibsashada iyo xirashada muraayadaha caanka ah, oo loola jeedo sharaf iyo xarrago, ayaa noqonaya mid aad u caan ah. Kuwa aan awoodi karin in ay qarash gareeyaan dhowr boqol oo doolar, waxaa sugaya muraayadaha muraayadaha Ray Banooniga ah, iyo sidoo kale Qalbiyada Kaliya, DITA, Glassino ama Miu Miu. Kaliya fiiri dukaankeena oo dooran nooca quman ee adiga kugu habboon.
Dhamaan muraayadaha muraayadaha ee dalabkayagu waa alaabooyin la soo saaro daryeelka ugu weyn, fiiro gaar ah oo ku saabsan faahfaahinta ugu yar iyo isticmaalka qalabka ugu fiican. Taasi waa sababta, marka aad soo iibsanayso, waxaad xaqiijin kartaa in aysan kaliya fiirin doonin, laakiin waxay noqon doonaan kuwo aan la garanaynin asalka. Taasi waxay ka hadlaysaa nooc kasta, iyadoon loo eegin haddii aad xiiseyneysey barnaamijka Versace, dareenka ugu sarreeya, faahfaahinta faahfaahinta ugu yar iyo isticmaalka qalabka ugu fiican, qaababka Gucci, noocyada Super ama Thom Brown: dhamaantood waxaa lagu gartaa tayada isku mid ah.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aragto dalabka buuxa ee hadda, hadda https://get2lux.cn/en/123-glasses
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aragto dalab buuxa oo hadda jira
Qof kasta oo ku takhasusay waxa uu waydiiyay qaybta ugu yar ee qalabka ee ragga ee haweenka iyo haweenka haweenka, iyada oo aan libiqsanayn, ka jawaabaan inay yihiin jeebka. Xaqiiqdii, inkasta oo aan xoogga saarno inaan xidhno dharka moodada ah, dahabka iyo muraayadaha, muraayaduhu uma muuqdaan kuwo muhiim ah. Dukaanka dukaamaysigu wuxuu kaa caawinayaa isbeddelkan isbeddelka adoo siinaya moodooyinka casriga ah, casriga ah iyo casriga casriga oo la yaab leh naqshadeynta iyo naqshadihii hore.
Qalabka albaabka, in kastoo oo dhan, laguma maareynayo noocyo badan oo aad u malayn kartid. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa ah midka cusub ee Miu Mi, oo ah soo saaraha oo ku takhasusay naqshadeynta jilayaasha gawaarida iyo Louis Vuitton, oo ka guulaystay suuqa suuqa ee loogu talagalay ragga. Dabcan, ururkeenna waxaad ka heli doontaa noocyo kale oo badan, oo ay ku jiraan Chanel, Gucci iyo Christian Louboutin. Moodooyin kala duwan oo leh qaybo badan, oo leh xirmooyin jilicsan ama magnets oo aan la arki karin, shaqo dhamaystiran oo dhar ah iyo naqshad muuqaal leh ayaa ah sifooyinka qeexaya nuqullada boorsada jeebka iyo iyaga oo ka dhigaya mid gaar ah suuqa oo dhan.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad fiiriso dukaankeenna oo aad eegto dalabka buuxa: https://get2lux.cn/en/120-wallets
Kombiyuutarka ayaa badanaaba ah alaabooyinka iibsiga badankooda lagu iibsado alaabo asal ah, iyada oo la ilaalinayo tayada la barbardhigo iyo muuqaal fiican oo la mid ah. Macaamiishu waxay qadariyaan jimicsiga iyo saxnaanta shaqada iyo sidoo kale cimilo aad u sareeya, iska caabin iyo sanado badan oo la isticmaali karo ee kabahaas. Ma aha wax la yaab leh in Burkel replektas, Prada, Gucci, Hermes ama Chloe yihiin markhaatiyada in iibsashada isla markiiba isla markaana tirada dadka ku qanacsan iibsashada noocan oo kale ah dhaqso ah laga bilaabo toddobaad ilaa toddobaad.
Waxaan abuuray dalab aad u taajirsan oo ballaadhan oo ka imanaya noocyada ugu caansan iyo kuwa ugu caansan, gaar ahaan adiga. Waxaad ka heli doontaa halkan labada kabo ee kabaha LV, Isabel Marant iyo Givenchy kabaha, laakiin sidoo kale moodooyinka laga helo Gucci, Prada ama YSL. Naqshadaha ugu dambeeyay iyo kuwa ugu mihiimsan, fiiri faahfaahinta ugu yar, tayada sare ee alaabada iyo ururinta hodanka ah ee alaabooyinka la heli karo waxay kuu sahlaysaa inaad hesho kabo soconaya sanado badan waxayna ku haboonaan doonaan wax kasta oo ku haboon. Kabaha kobcinta ayaa na iibiya - iyada oo aan loo eegin nooca ama naqshadeeyaha doortay - waa dammaanad ah macaamil guulaystay, socod raaxo leh iyo qanacsanaanta iibsashada.
Sidee loo aqoonsadaa dharka ay tahay mid tayo fiican leh marka loo eego walxaha la isticmaalo? Miyuu u baahan yahay in wax laga soo iibsado internetka oo sharci ah, ammaan ah oo dhakhso ah? Ugu dambeyntiina, miyuu qiimihiisu yahay iibsashada replicas meeshii uu asal ahaan ka soo jeedo, inkastoo qiimaha ay ku kala duwan yihiin boqolaal zlotys? Dhammaan su'aalahaan waxaa ka jawaabaya dukaankeena dharka ee dharka, kaas oo aan kuugu martiqaadeyno.
Sannado badan, iibsashada dharka dharka ma aha dhibaato weyn ama ceeb; In kabadan nuska dadku waxay xiran yihiin noocyada kala duwan sababta oo ah tayada dharka noocan oo kale ah waxay la mid tahay kuwa asalka ah. Replicas of YLS, Alexander Mqueen, Emporio Armani iyo Kenzo ayaa laga heli karaa dukaankeenna; Waxa kale oo aanu haynaa dhar dhaqaale oo ka yimaada Chloe, Louis Vuitton iyo Moschino. Xirfadaha Gucci iyo dharka ee xirfadleyda ah ee Givenchy, oo loogu talagalay gaar ahaan kuwa macaamiisha yaryar iyo casriga ah ee magaalooyinka waaweyn, ayaa aad u jecel.
Waxaan kugu dhiirigelineynaa inaad naftaada ku barato bixinta faahfaahsan ee dukaanka, oo aad ka heli karto boggan https://get2lux.cn/en/115-clothing
Koofiyado ka soo jeeda Chanel, silsilad ka timid Diora, jijin ka yimid Louis Vuitton? Ma ahan waqti dheer, sida xad-dhaaf ah ayaa loo heli karaa oo kaliya dadka yar yar ee la doortay ee haysta jeebka si aan caadi ahayn leh. Maanta, nuqul ka mid ah dahabka laga soo qaato Cartier, TOUS ama Piageta ayaa loo heli karaa qof walba, iyo qiimaha aan keenin madax xanuun.
Helitaanka sahlanaanta iyo qiimaha hooseeya ayaa ah qodobbada go'aan ka gaadhaya guusha weyn ee waxqabadka jewelery ay hadda ku raaxeysanayaan Poland. Dumarka iyo ragga ka soo jeeda dhammaan dhinacyada dalka oo iibsanaya oo xiran, iyada oo aan loo eegin xaaladda bulshada ama xisaabtarka xisaabta. Kala duwanaanshaha dalabka iyo qiimaha ayaa u ogolaanaya qof walba in uu doorto nooca dahabiga ah ee aysan ahayn oo kaliya, laakiin sidoo kale waa awoodi karaa. Iyadoo aan loo eegin xaqiiqda haddii ay tahay jewelery ka soo ururinta Tiffany & Co Replica, ama model ka yimid naqshad yar oo loo yaqaan - dhammaantood waxaa laga iibsan karaa dukaamadayada, sicirrada soo jiidashada leh, iyo damaanad qaadka macaamilka guuleysta oo ammaan ah.
Laakiin ha u qaadin ereygayaga, kaliya fiiri dukaamadayada ku dhejinta jewelery, halkan waxaa laga heli karaa https://get2lux.cn/en/121-jewelery Iyada oo qayb ka mid ah gallannaraha lagu xidho curcurka, saacadaha ayaa loo yaqaan waqtiga wakhti gaaban, kaliya waxoogaa in ka badan boqol sano. Horaantii, waxaa lagu xiray meelo jilicsan, oo ku xiran silsilad. Maanta, qalabkan aan fiicnayn waxay ku raaxeystaan ​​caanno guud, iyo sidoo kale cajaladaha isdabajooga ee ka soo jeeda markabka iyo warshadaha caanka ah. Waxaa ka mid ah aqoonsiga shirkadaha sida: Emporio Armani, U-boat, Rolex, laakiin sidoo kale Audemars Piguet ama Cartier. Moodooyinka asalka ah ee daawashada waxay badanaa ku kacaan xitaa kumanaan doolar, taas oo, ka dib markii loo beddelo złotys, waxay noqonaysaa nasiib daro. Taasi waa sababta aysan aheyn wax la yaab leh in danta Poles ay tahay mid la sawiray si loo yareeyo noocyada Rolex halkii uu ka ahaan lahaa asalka, oo aan si fudud u heli karin waddankayaga. Laakiin ma iibsanaayo siyaabo bedelaad ah oo kufilmaamaya inaad ka xajisid ama ku jeesato isticmaalka alaabada aan rasmiga ahayn? Xaqiiqdii maaha! Kombiyuutarrada laga bilaabo U-doonka ama TAG Heuer ma aha mid ka xun kuwa asalka u ah muuqaalka ama midnimada, iyo farqiga labadaba waa mid aan macquul ahayn. Moodooyinka la soo sheegay, iyo sidoo kale noocyo kale oo badan oo saacado ah.
Iyada oo qayb ka mid ah gallannaraha lagu xidho curcurka, saacadaha ayaa loo yaqaan waqtiga wakhti gaaban, kaliya waxoogaa in ka badan boqol sano. Horaantii, waxaa lagu xiray meelo jilicsan, oo ku xiran silsilad. Maanta, qalabkan aan fiicnayn waxay ku raaxeystaan ​​caanno guud, iyo sidoo kale cajaladaha isdabajooga ee ka soo jeeda markabka iyo warshadaha caanka ah.
Waxaa ka mid ah aqoonsiga shirkadaha sida: Emporio Armani, U-boat, Rolex, laakiin sidoo kale Audemars Piguet ama Cartier. Moodooyinka asalka ah ee daawashada waxay badanaa ku kacaan xitaa kumanaan doolar, taas oo, ka dib markii loo beddelo złotys, waxay noqonaysaa nasiib daro. Taasi waa sababta aysan aheyn wax la yaab leh in danta Poles ay tahay mid la sawiray si loo yareeyo noocyada Rolex halkii uu ka ahaan lahaa asalka, oo aan si fudud u heli karin waddankayaga. Laakiin ma iibsanaayo siyaabo bedelaad ah oo kufilmaamaya inaad ka xajisid ama ku jeesato isticmaalka alaabada aan rasmiga ahayn? Xaqiiqdii maaha! Kombiyuutarrada laga bilaabo U-doonka ama TAG Heuer ma aha mid ka xun kuwa asalka u ah muuqaalka ama midnimada, iyo farqiga labadaba waa mid aan macquul ahayn.
Moodooyinka la soo sheegay, iyo sidoo kale noocyo kale oo badan oo saacado ah.